Amplifinity: Ngwọta maka Mgbasa Ozi | Martech Zone
Thursday, January 23, 2014 Thursday, January 23, 2014 Douglas Karr
Amplifinity na-enyere B2B, B2C na genlọ ọrụ aka ịkwalite atụmatụ ịkwado akara. Abamuru nke mmemme ịkwado mmemme na-eme ka nnweta ndị ahịa ka mma, okike nke ndị na-akwado nkwado na-eru eru, na n'ikpeazụ - ịkwanye ahịa.
Ulo oru ha mebiri n'ime ihe ndia:
Ahịa Aka - AMP na-ejikọ ọnụ ọnụ ahịa ndị ahịa anyị ozugbo na sistemụ ụlọ ọrụ ha - site na ntinye aka site na akaụntụ nnabata, wijetị dị ike, ma ọ bụ njikọ dị mfe.
Mmemme Nkwado - AMP na-eme ka ọ dị mfe ịjụ ndị ahịa gị ka ha gbasaa okwu na nnọchite gị. N'iji akwukwo Akaụntụ M maka ichoputa oru ha, oganihu ha, na ugwo olu ha, ndi na akwado ya noro na nghota ma mara na ha bara uru na oganihu nke ulo oru gi.
Roomlọ Njikwa - Ime ụlọ AMP na-enye ohere maka ụdị iji wuo, soro ma jikwaa Mmemme Nkwado. Nhazi ha na ikike haziri ha nyere ndi ahia ikike iji, mezie ma jikwaa mmemme ha. Ha nwere ike hazie ma chịkwaa nhazi peeji, arụmọrụ, na ịkwụ ụgwọ nhazi.
Mmekọrịta Enterprise - Ezubere maka mwekota nke ngwa ọrụ, ọrụ sitere na ikpo okwu ha, site na ndị na-ezo aka na ire ahịa emechiri emechi, nwere ike ịbanye na usoro CRM gị ozugbo.
Tags: njuputaika akwado
Jenụwarị 23, 2014 na 3:28 PM